Fanodinkodinam-bolam-panjakana :: Nogadraina ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fitsarana iray • AoRaha
Fanodinkodinam-bolam-panjakana Nogadraina ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fitsarana iray
Vehivavy roa, tompon’andraikitra teo anivon’ny ministeran’ny Fitsarana sy mpitahiry vola tao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana ankapobeny, etsy Antaninarenina, no naiditra am-ponja vonjimaika, eny Antanimora.
Notorian’ny minisiteran’ny Fitsarana noho ny fanodinkodinam-bolam-panjakana teo anivon’ny Tahirim-bolam-panjakana ankapobeny, izay mitentina 851 000 000 ariary izy roa vavy ireto.
Tamin’ny zoma lasa teo, nandritra ny raharaham-pitsarana andiany fahefatra natao teny amin’ny Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) 67 Ha, no niakatra Fampanoavana ny raharaha. Tamin’io andro io ihany no nivoahan’ny didin’ny Fampanoavana, araka ny fanazavan-dRakotomahefa Mamy Tantely, Tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny PAC 67 Ha, nandritra ny antso an-tariby nifanaovana taminy, omaly.
“Tazonina am-ponja vonjimaika aloha izy ireo mandra-pahavitan’ny fanadihadiana mbola hataon’ny PC. Aorian’izay no hotsaraina ny raharaha. Tsiahivina fa tamin’ny volana janoary 2018 ka hatramin’ny volana septambra 2019 no nanodinkodinam-bola ireto voampanga ireto. Tratran’ny minisiteran’ny Fitsarana izany ka niroso tamin’ny fanangonana porofo mivaingana izy ireo. Taorian’izay no nampiakarana ny raharaha tety amin’ny PAC 67 Ha. Tsy hionona amin’ireo porofo nomen’ny minisitera ireo fotsiny anefa ny PC fa mbola hanao ny fanadihadiana manokana ihany koa”, hoy izy.
Fanenjehana mpitsara nanao kolikoly :: Miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny CSM ny Pac